Ku soo degso WhatsApp bilaash ah iPhone, iPad, Mac ama PC | Wararka IPhone
Ku soo dejiso WhatsApp bilaash Way fududahay, maxaa yeelay hadda, codsigu gebi ahaanba waa u bilaash dhammaan meheradaha. Taasi waa sababta ugu weyn ee guusheeda, iyo sidoo kale suurtagalnimada in laga heli karo boqollaal milyan oo qalab adduunka oo dhan ah. Sidaa awgeed, waxaan dooneynaa inaan ku siino gacan aad ku ogaato sida ku rakib WhatsApp bilaash ah habka ugu fudud, mahadnaqa casharradeenna qaaska ah. Sidaa darteed, ka faa'iideyso cuntooyinkayaga iyo qaybaha kala duwan si aad u hesho casharrada aad u baahan tahay, waxaan ku siin doonnaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aadan u seegin hal tallaabo inta aad rakibayso.
WhatsApp ee iPad
Whatsapp u Mac
Whatsapp ee iPhone
Intaas waxaa sii dheer, WhatsApp wuxuu leeyahay guuto muhiim ah oo injineero ah oo ka dambeeya, laakiin si rasmi ah oo keliya maahan, laakiin sidoo kale si aan rasmi ahayn, sidaa darteed noocyada wax laga beddelay ee WhatsApp lama waayi karin, taas oo loo yaqaan caanka Whatsapp lagu daro, Codsi WhatsApp ah oo noo ogolaanaya inaan wax badan ka helno, maadaama ay ku jiraan hawlo fantastik ah oo aanu asalka codsigiisu lahayn, waa sababta aan kuugu caawinayno inaad si bilaash ah ugu dejiso WhatsApp Plus qalabkaaga, noocyadii ugu dambeeyay wax ka beddelka ugu caansan macaamilka farriinta ugu caansan caalamka teknolojiyadda.
1 Ku raaxayso WhatsApp qalab kasta
2 Ku rakib WhatsApp kombiyuutarka
3 Waa maxay Whatsapp?
4 Marwalba waad cusbooneysiin kartaa WhatsApp
5 Nidaamka sirta ee WhatsApp
6 WhatsApp ayaa nolosheena badashay
6.1 Beddelka WhatsApp
7 Baro WhatsApp Plus iyo noocyadeeda
8 WhatsApp dalal kale
9 Waxyaabaha aadan ka ogeyn WhatsApp
Ku raaxayso WhatsApp qalab kasta
Kiiska WhatsApp loogu talagalay iPhone waa wax gaar ah. Barmaamijka Apple wuxuu ahaa kii ku dhashay WhatsApp isagoo ah macmiil fariin ah, wuxuu yimid sanadkii 2010 oo ku xirnaa iOS App Store oo qiimahiisu ahaa 0,99 XNUMX, tanina waxay kuu xaqiijisay adeeg nolosha ah, taas oo ah, uma baahnid inaad cusboonaysiiso WhatsApp bilaash ah, laakiin WhatsApp had iyo jeer way shaqeysay ka dib iibsigii ugu horreeyay. Markii dambe WhatsApp ayaa xor noqotay 2013, hase yeeshe, waxay noqotay adeeg rukumeysi sannadle ah, waxay ku kacday € 0,99 sanadkii adeegga. Waxyaabaha markii la helo Facebook gebi ahaanba la tirtiray, hadda soo dejinta WhatsApp bilaash ah ayaa gebi ahaanba suurtagal ah, iyo weligiis.
WhatsApp si cad ayaa loo bilaabay Blackberry Sidoo kale, in kasta oo xaqiiqda ay tahay in maanta ay tahay nidaam la joojiyay sababtuna ay tahay maqnaanshaha shirkadda, WhatsApp wuxuu sii wadaa inuu si buuxda u shaqeynayo oo bilaash ku yahay nidaamkan qalliinka. In kasta oo ay haysatay BBPin oo ay xafiiltan weyn ka dhexaysay kiiskan, haddana WhatsApp ayaa mar kale ku guuleysatay in ay ku xukunto nidaamka sida ay doonto, dadka isticmaala badankooduna waxa ay door bideen in ay doortaan macmiilka ugu caansan ee farriimaha deg degga ah ee suuqa yaalla, haddana iyaga eedayn mayno. BlackBerry waxaa loogu talagalay si sax ah taas, kumbuyuutarradeedu waxay bixiyaan xawaare qoris iyo fududaan aaladaha kale aysan gaarin.
Looma waayi karo sidoo kale WhatsApp on Android, waa nidaamka ugu weyn ee ka hawl gala suuqa, wuxuu xukumaa qiyaastii 70% aaladaha mobilada ee adduunka oo dhan, marka WhatsApp way ka xoog badan tahay Android marka loo eego nidaam kasta oo hawlgal. Madalkani wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee ay kala soo bax WhatsApp bilaash Waxa kale oo suurtogal ahayd in dib loo cusboonaysiiyo diiwaangelinta arjiga ma noqonin mid aad u daallan Android, tan iyo markii maalmihii la soo dhaafay marinku dib u hawlgalay oo cusbooneysiinta hal sano ah ay ka soo baxday meel aan jirin. Ku soo dejiso WhatsApp-ka Android Way fududahay sida aadida Google Play Store oo aad ka dhex baarto barnaamijyada la soo dejisto, had iyo jeer waa mid waligiisna ka mid noqon doona kuwa ugu horeeya.
Waxaa la mid ah kaniiniyada caqliga badan, ku soo dejiso WhatsApp kiniin ahaan Gabi ahaanba waa suurtagal, waxaanan helnaa waxyaabo kale oo badan, gaar ahaan marka qalabka su'aashu ku socoto nidaamka hawlgalka Android. Waxaan fursad u leenahay inaan ku rakibeyno adoo adeegsanaya kaar SIM ah oo ku jira kiniinka laftiisa, ama ka faa'iideysiga wixii kaarka kale ee SIM-ka ah ee mobilka ku jira. Intaa waxaa sii dheer, nooca WhatsApp Web ayaa loo isticmaali karaa kiniiniyada iyadoo la adeegsanayo qaabka desktop-ka ee biraawsarka aan doorbidno, sidaas darteed waxaan ku heli doonnaa nooc ka mid ah WhatsApp kiniinka iyada oo aan dadaal badani jirin.
Si kastaba ha noqotee, kan ugu caansan kiniiniyada ayaa si toos ah iPad ah. Kiiskan, rakib WhatsApp asal ahaan, taasi waa, codsi ahaan, waa wax aad u adag, oo waxaan kaliya ku fulin karnaa dhaqdhaqaaqan adoo adeegsanaya qalab sida Jailbreak, si kastaba ha noqotee, sida kiniiniyada Android, waxaa suurtagal ah in si fudud loogu isticmaalo adeegga Websaydhka WhatsApp. biraawsarka kumbuyuutarka ipadkeena, si aan u isticmaali karno WhatsApp bilaash ah iPad-ka Dadaal badan la'aan, waxaan kaliya ku qasbanaan doonnaa inaan ka helno adeegga Webka WhatsApp bog furaha Safari laftiisa oo aan dooranno qaabka nooca desktop-ka.
Ku rakib WhatsApp kombiyuutarka
Bishii Maajo 2016, waxaan helnay war sheegaya in WhatsApp ugu dambeyntii go'aansatay inay soo bandhigto nooc ka mid ah WhatsApp loogu talagalay MacSidaas awgeed, waxaan toos ugula soo dagsan karnaa barnaamijka WhatsApp-ka si toos ah Mac-keena si deg deg ah oo aan ula sheekaysan karnaa dhammaan xiriiradayada dhammaan raaxada kumbuyuutarka iyo shaashadda kombiyuutarkayaga, ha ahaato laptop sida MacBook ama desktop sida iMac, muhiimadda wax ayaa ah inaan la xiriiri karno asxaabteena iyo kuwa aan jecelnahay mahadsanid codsigooda WhatsApp loogu talagalay Mac.
Laakiin wax walba halkan kuma sii ekaanayaan, waana taas codsiga Whatsapp for pc yimid isla waqtigaas. Kumbuyuutar kasta oo nidaamkiisu ka hawl galo Windows 8, Windows 8.1 ama Windows 10, wuxuu ku soo dejisan karaa WhatsApp kombiyuutarka oo uu u socodsiin karaa asal ahaan sida barnaamij kasta oo kale. Barta kaliya ee taban ayaa ah inay tahay macmiil Websaydh WhatsApp fudud, oo aan ahayn codsi gooni ah. Si kastaba ha noqotee, kama wada hadli karno oo kaliya dhammaan xiriiradayada sida nooca WhatsApp ee iPhone iyo WhatsApp ee Android, laakiin waxaan sidoo kale u diri karnaa dukumiinti xiriiradayada, iyo dabcan, la wadaagno sawirrada aan ku haysanno kombuyuutarkayaga.
Waa maxay Whatsapp?
WhatsApp waa codsiga ugu caansan ee fariimaha deg dega ah mudooyinkii ugu dambeeyay. Kaliya maahan barnaamijka ugu isticmaalka badan taleefannada casriga ah ee adduunka oo dhan, laakiin sidoo kale waa waxay bedeshay qaabkii aan ula xiriiri lahayn qof walba, codsigani wuxuu fududeeyay ilaa xad xad dhaafka ah ee suurtagalnimada in farriimo loo diro xiriiradayada. Xaqiiqdii, waxaan xitaa tixgelin karnaa in sida aan ula xiriirno kuwa aan jecel nahay ay isbadashay, wax badan baa isbadalay waqti kadib, laakiin nuxurka wali waa sidiisa, fariimaha si dhaqso leh u dir.
Waxay u maleyneysay inay keyd weyn ku laheyd biilasha dadka oo dhan, maaddaama oo ay sii kordheyso tiknoolajiyada 3G codsiyada badan ayaa bilaabay inay bataan, hase yeeshe, midkoodna sidaa uma badneyn, fududahay in la isticmaalo oo dhakhso badan sida WhatsApp. Taasi waa sababta, waxay si dhakhso leh u xardheen god oo ay u beddeleen PIN-ka BlackBerry. Way fududahay in la diro farriimo aan la koobi karayn oo aan xadidnayn waqtiga dhabta ah, marka lagu daro, waxyar kadib markay ogolaatay in la abuuro kooxo xiriiro isla sheekaysiga ah, iyo sidoo kale shaqada u dirista sawirrada, kor u qaadista WhatsApp xagga sare ee dhammaan dakhliga liisaska iyo guusha, waxkastoo madal ah.
Codsiga markii ugu horreysay wuxuu yimid IOS App Store bishii Janaayo 2010, sidaa darteed, hadda codsigu wuxuu ka yaraa lix sano. Laakiin markii waqtigu dhammaado waxay la jaanqaadday Android, BlackBerry, Windows Phone, Symbian iyo xitaa S40 Series. Qaar badan oo ka mid ah nidaamyadan hawlgalka ayaa la waayey halka WhatsApp uu sii waday inuu sare u kaco. Taasi waa sababta aan shaki uga qabin inay guuleysato, WhatsApp-ka ayaa isbedel ku sameeyay adduunka farriinta sidaan ognahay.
Magaca codsigu wuxuu ka yimid muujinta Ingiriisiga "Maxaa jira?", salaan diirran oo moodada u ah dhalinyarada. Iyada oo wax walba leh iyo tan, waxa had iyo jeer ku sii jiray sannado badan waxay ahayd astaanteeda cagaaran, buufin farriin ah oo ay ku jiraan taleefan gudaha ah, fudud laakiin toos ah, astaan ​​caalami ah oo la aqoonsan yahay, sida ay u noqon karto nooc kasta oo summad weyn ah, waana WhatsApp qayb ka mid ah nolol maalmeedka boqollaal milyan oo dad ah oo adduunka ku nool, sidaada oo kale, ee na aqrinaya. Taasi waa sababta aad u timid boggan, maxaa yeelay waxaan dooneynaa inaan ku barinno wax walba oo ku saabsan codsigan cajiibka ah, si aad uga faa'iideysato oo aad ugu raaxaysato la sheekaysigaaga. Ma ogtahay inay horeba u jireen dad dhib soo gaadhay Qabatinka WhatsApp?
Marwalba waad cusbooneysiin kartaa WhatsApp
Cusbooneysiinta WhatsApp waa wax fudud, waxkastoo madal kuu ah, kaliya waa inaad aadaa macruufka App Store oo aad ka eegtaa cusbooneysiinta si aad u ogaato inay tahay waqti iyo in kale cusboonaysii WhatsApp. Mid ka mid ah cusbooneysiinta la doorbidayo ee loogu talagalay 'WhatsApp for iOS' waa waxa loogu yeero "bug fixes", oo inta badan hagaajiya waxqabadka guud ee barnaamijka, laakiin qariya warar badan oo dhowaan soo bixi doona. Dhinaca kale, marka laga hadlayo Android, shaqadu waa isku mid, waa inaan tagnaa Google Play Store, isla marka aan soo galnona, waxay noo sheegi doontaa codsiyada u baahan cusbooneysiinta.
Nidaamka sirta ee WhatsApp
Kororka dalabaadka amniga ee waqtiga kadib, WhatsApp wuxuu go'aansaday bilowgii sanadka 2016 in lagu daro nidaamka sirta fariinta. Markay suurtagal tahay, wicitaanada iyo farriimaha la diro ayaa loo dhammeeyaa si qarsoodi ah, taas oo macnaheedu yahay WhatsApp iyo dhinacyada saddexaad ma dhageysan karaan ama ma aqrin karaan. Ogeysiis nabadgelyo oo yar ayaa la soo bandhigi doonaa mar kasta oo aan bilaabi karno wadahadal lala yeelanayo isticmaale cusub si aan taas noogu soo sheegno dhammaan isgaarsiintayada waa la ilaaliyaa oo la xafidayaaWhatsApp aad ayey ugu sharraxantahay amniga iyo arimaha gaarka ah, mana ahan wax aan quudhsan karno, maanta aad ayey muhiim u tahay in xogteenna la ilaaliyo.
WhatsApp ayaa nolosheena badashay
Sida laga soo xigtay daraasadihii ugu dambeeyay, 53% Isbaanishku waxay leeyihiin inta udhaxeysa 5 iyo 50 WhatsApp chats maalintii, mana aha wax naga yaabiya, inbadan iyo inbadan oo naga mid ah ayaa u adeegsada codsigan habka ugu weyn ee aan u wada xiriirno, tiro aad u badan oo adeegsadayaal ah oo daafaha dunida ku nool ayaa kalsooni fiican ka qaba Dhanka kale, 90% dadka isticmaala WhatsApp waa isticmaaleyaal firfircoon, taas oo ah, waxay adeegsadaan adeegga in kabadan hal jeer maalintii, taas oo ka dhigaysa hab dhab ah uguna muhiimsan ee isgaarsiinta. Codsiga farriinta deg degga ah ee ugu badan ee la adeegsado oo leh 98,1% dhammaan isticmaaleyaasha, kana sarreeya tartanka sida Telegram, Skype ama Facebook Messenger.
Bishii Febraayo 2016, WhatsApp ayaa jabisay xayndaabka hal bilyan oo isticmaale, adeegga farriinta ayaa ka sarreeya macaamiisha Facebook Messenger 200 milyan, tusaale ahaan. Sida laga soo xigtay tirakoobkii ugu dambeeyay, barnaamijyada WhatsApp waxay xambaaraan ku dhowaad 42.000 milyan oo farriimo iyo in ka badan 250 milyan oo fiidyowyo ah maalintii, waa culays aad u muhiim ah, oo ka marag kacaya caan ka ahaanshaha macmiilkan farriinta ah iyo sida uu habku isu beddelayo. , kuwa la jecel yahay iyo dhammaan noolaha inagu xeeran.
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay tahay tan ugu ballaaran ee loo isticmaalo adduunka, haddana waxaa jira suuqyo iska caabiya, sida Shiinaha, oo ay doorbidaan WeChat, Kuuriyada Koofureed, halkaasoo uu ka taliyo Kakao Talk, ama Japan, halkee Line waxay sii wadaa inay sii haysato booskeeda xukunka. Si kastaba ha noqotee, iyada oo xaqiiqda ah in codsigu uu xor u yahay nolosha iyo bilaabista WhatsApp Web, inbadan iyo ka badan ayaa ku biiraya.
Baro WhatsApp Plus iyo noocyadeeda
In kasta oo iyagu ayan diyaar u ahayn macruufka (haddii aanad JAILBILL mooyee), qaar badani Wax ka beddelka WhatsApp Plus taas oo ay sameeyeen horumariyeyaal kala duwan. Tusaale ahaan, whatsapp plus holo, kaas oo ahaa nooc ka mid ah WhatsApp Plus kaas oo u oggolaaday isticmaalka aaladda 'Holo interface' aaladahaas Android ee aan wali la cusbooneysiin. Nooca Holo-kan ayaa la joojiyay dhammaadkii sanadkii hore sababtoo ah xaqiiqda ah in aaladaha Android badankood ay horey u lahaayeen interface-ka hore loo soo sheegay. Si kastaba ha noqotee, ilo kale ayaa soo ifbaxay, sida WhatsApp Plus Jimmods, wax ka beddelka WhatsApp ee ku saleysan mid ka mid ah waxyaabihiisii ​​ugu dambeeyay, kana dhigaya mid ka mid ah noocyada ugu xasilloon ee aan ka heli karno shabakadda.
Meeshan waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka loo baahan yahay, dhammaan wax ka beddelka WhatsApp, noocyadii asalka ahaa, iyo sidoo kale casharro fudud oo la heli karo si aad uga faa'iideysan karto Bilaash whatsapp. Waxaa muhiim ah inaan si qoto dheer u ogaanno codsi sida ballaaran loogu isticmaalo WhatsApp, wixii intaas ka sarreeyana waxaan ognahay xaddidaadyadiisa, qiimayaasheeda iyo waxyaalaheeda. Codsiga astaamahan wuxuu noqon karaa seef laba af leh iyadoo kuxiran hadba xaaladaha jira, sidaa darteed waxaan ku ilaalinaynaa taxaddar iyo xirfad badan.
WhatsApp dalal kale
Qaabka ay WhatsApp u jabisay xuduudihii juquraafiyeed ayaa iyaduna xusid mudan, su’aasha ayaa ka dhalanaysa bal in Waxaan ku isticmaali karaa WhatsApp meel ka baxsan dalkayga, jawaabtuna gabi ahaanba waa haa. WhatsApp wuxuu ku shaqeyn doonaa bilaash meel kasta ama qalab horay loo hawlgeliyey oo leh xiriir internet, ama 3G ama WiFi. Intaas waxaa sii dheer, ma waayi doonno isticmaaleyaasheenna illaa aan ka tirtirno arjiga, sidaas darteed WhatsApp way fududahay in laga isticmaalo waddan kasta, waan sii wadi karnaa inaan la sii wadno xiriirka aan la leenahay kuwa aan jecel nahay meel kasta oo aan joogno, waxaan u baahannahay oo keliya xiriir internet ah
Suurtagalnimada kale ee wanaagsan ee WhatsApp, waa inaan awoodno isticmaal isla koontadayada WhatsApp wixii kaarka ah in aan soo bandhignay. Taasi waa, haddii, tusaale ahaan, aan ku hawlgalnay WhatsApp-geena kaarka qaranka, laakiin waxaan u safreynaa dibadda waxaanan door bidnay inaan bixinno sicirka xogta ee ka jirta waddanka loo socdo, kaliya waa inaan gelino kaarka oo aan sii wadno raaxeysiga waa tan, tan iyo xiriiradayada Waxay sii wadi karaan inay nala sheekaystaan ​​lambarkayagii hore ee ku xirnaa WhatsApp, waa hab wanaagsan oo lagu sii wadi karo la hadalka saaxiibadeena marka aan degganahay dibadda, in kasta oo aan halkaa ku hayno lambar taleefan oo kale si aan uga faa'iideysano sicirka qaranka.
Waxyaabaha aadan ka ogeyn WhatsApp
WhatsApp wuxuu dhashay sanadkii 2009. Dib ugu laabo 2014, WhatsApp waxaa Facebook ku iibsaday 19.000 milyan oo doolar, waxa laga yaabo inaadan ogeyn inay tahay magaca abuuraha WhatsApp, Jan Koum iyo Brian Acton, ayaa ka tagay Yahoo sanadkii 2009 waxayna adeegyadooda u soo bandhigeen Facebook iyo Twitter, labada shirkadoodba waa ay diideen, mana garanayaan inta ay ka qoomameynayaan, taasina waa in Facebook ay badbaadin laheyd balaayiin doolar haddii ay shaqaalaysiin lahaayeen iyaga. Shaqaalayntu uma adeegin abuurayaashu si la yaab leh, oo ku noqday bilyaneerro habka ugu geesinimada leh ee ugu macquulsan.
Dhinac kale oo laga yaabo inaadan garanayn ayaa ah WhatsApp waligeed hal dinaar kuma bixin xayeysiintaMaaddaama shirkaddu waligeed aysan dhigin xayeysiin meel kasta oo ay ku dhiirrigeliso barnaamijkeeda, guusha waxay ahayd hadal afka ah. Intaa waxaa sii dheer, waxay ka dhigeysaa wadayaasha inay lumiyaan lacag aad u badan, marka hore iyaga oo tirtiraya SMS-ka hadana waxay sidoo kale ku darayaan suurtagalnimada wicitaanada taleefanka VOIP ee loo maro WhatsApp. Si kastaba ha noqotee, wicitaanada fiidiyowga sidoo kale waxay ku socdaan wadada WhatsApp, taas oo macnaheedu noqon karo isbeddel kale oo xiiso leh oo ku saabsan habka aan u wada xiriirno, WhatsApp ayaa beddeleysa wax kasta oo ay taabato, taasina waa in hal bilyan oo doollar oo adeegsadayaasheeda ah ay halkaas ku raaci doonaan meel kasta oo aan aado.
Waxaan rajeyneynaa inaad hesho waxkasta oo aad raadineyso wasakh Halkan, waxaan haynaa wax walba oo aad ubaahan karto oo laxiriira codsiga fariimaha deg dega ah ee suuqa. Haddii aad rabto soo dejiso whatsapp bilaash ah, halkan waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay.